IGreyhound kunye neWolfwalker abaphumeleli i-Oscar yokuqala ye-Apple TV + | Ndisuka mac
IGreyhound kunye neWolfwalker abaphumeleli u-Oscar wokuqala kwi-Apple TV +
Njengoko bekucwangcisiwe, uhlelo lubanjwe phezolo Amabhaso ama-93 ee-Academy eHollywood, umsitho apho uApple wakhetha imifanekiso eqingqiweyo emibini yeefilimu iWolfwalkers kunye neGreyhound, nangona kunjalo, zombini iifilimu zishiywe zingenanto.
Kolu hlelo, ifilimu ephumeleleyo, eneemifanekiso eqingqiweyo ezi-3 (ze-6 eyayityunjelwe zona) ibikhona NomadlandIfilimu efumaneka nge-30 ka-Epreli kwiDisney + ephumelele amabhaso Esona sikhokelo siBalaseleyo, iMuvi bhanyabhanya kunye noMlingisi oPhambili.
1 Abahambi ngeenyawo
3 Abanye abaphumeleleyo
Ifilimu yoopopayi Abahambi ngeWolkfwalkers I-Apple TV + ukhuphiswano kudidi lweFilimu ePhambili yoPhilayo kunye Ngaphezulu, Ngaphaya kwenyanga, Shaun iigusha y UmphefumloOwokugqibela uphumelele kolu luhlu, imovie efumaneka kwiDisney +.
Greyhound, edlala uTom Hanks, ebekhuphisana kudidi lweSandi esiGqwesileyo neMidlalo bhanyabhanya Umntu, Iindaba ezivela kwihlabathi elikhulu, Umphefumlo y Isandi se-Metal. Isandi se-Metal ibiyi Ophumelele imbasa yeAkhademi kolu didi kwaye yonyulwa kwakhona kudidi lweFilimu eBalaseleyo.
Njengoko ndibekile, Nomadland Ibiyifilimu efumene amabhaso amaninzi ngee-Oscars ezi-3. Kwindawo yesibini, sifumana umboniso bhanyabhanya u-El Padre, umboniso bhanyabhanya ophumelele ii-Oscars ezi-2 (otyunjiweyo izihlandlo ezi-6): njengeGcisa eliPhambili U-Anthony Hopkins kunye neMiboniso bhanyabhanya eFanelekileyo.
Umntu, kunye nee-Oscars ezi-2 kwezili-10 zokutyumba, iphumelele i-statuette yoYilo oluPhambili lweMveliso kunye neCinematografi. Uluntu yifilimu ekhokelwa ngu UDavid FincherInkwenkwezi uGary Oldmand kwaye iyafumaneka kwiNetflix.
UOscar kudidi Eyona bhanyabhanya yamanye amazwe uye eDenmark kunye nefilimu Omnye umjikelo, Umdlalo bhanyabhanya obonisa uMad Mikkelsen (umntu ombi ovela kwimovie ye-007 Casino Royale kunye nomlinganiswa ophambili kuthotho olumnandi Hannibal).
Ngokuphathelele Umelo oluthetha iSpanishSifumana kuphela uSergio López-Rivera, owathi kunye noMia Neal noJamika Wilson baphumelela imbasa yeAkhademi kudidi lweMakeup eBalaseleyo kunye neHirstyling yefilimu. Umama weblues, Umdlalo bhanyabhanya ohamba phambili noViola Davis kwaye ufumaneka kwiNetflix.
I-Tennet, enye ye-premieres enkulu yonyaka odlulileyo kwaye eyayigubungelwe ngubhubhane, ifumene u-Oscar omnye kuphela kwicandelo Iziphumo ezibonakalayo ezingcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IGreyhound kunye neWolfwalker abaphumeleli u-Oscar wokuqala kwi-Apple TV +
Ukuthunyelwa kweAirTag kuyaqhubeka nokuqokelela ukulibaziseka kwabathengi abatsha